Ny antsoina hoe taonan'ny vorontsiloza amin'ny fahatanorana | Bezzia
Ny antsoina hoe taonan'ny vorontsiloza amin'ny fahatanorana
Maria Jose Roldan | 02/07/2021 22:00 | tanora
Tsy misy olona miady hevitra amin'ny hoe tsy mora na tsotra ny manabe zaza. Ny dingana rehetra amin'ny fiainana dia sarotra, na dia ny mihinana mofomamy aza tsy misy fisalasalana dia ny fahatanorana. Tena dingana sarotra amin'ny fiainana na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tanora mihatra amin'ireo fanovana ireo.
Matetika lazaina amin'ny fomba fiteny fa taonan'ny vorontsiloza izy io na dia tsy ity aza no marina indrindra. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka bebe kokoa momba ireo marika sy stereotypes samihafa manodidina ny tontolon'ny fahatanorana isika.
1 Ny fahatanorana dia fotoan'ny labozia sy stereotype
2 Fa maninona no fotoana maha-tanora ny fotoana maha tanora?
Ny fahatanorana dia fotoan'ny labozia sy stereotype
Toy ny efa nolazainay, ny fahatanorana no dingana sarotra indrindra tsy maintsy lalovan'ny olona rehetra. Miharihary noho izany ny fiovana ara-batana sy ara-pihetseham-po ary maro ny tanora no sosotra amin'ny lafiny rehetra. Stereotypes sy labels momba ny fahatanorana dia manjelanjelatra ary tsy mankasitraka ny tanora velively.
Tsy azo ampifandraisina amin'ny sehatry ny fahatanorana izany miaraka amin'ny zava-mahadomelina, alikaola, fety, tsy fanajana na herisetra. Mihoatra noho izany ny tanora, ny zava-mitranga dia dingana sarotra amin'ny fiainana izy io ary fanovana maro.
Raha jerena izany dia maro ny ray aman-dreny matahotra ny ratsy indrindra alohan'ny hahatongavan'ny fahatanorana. Ny iray amin'ireo andianteny miely indrindra amin'ny fiarahamonina ankehitriny dia ny zaza rehefa feno taona dia efa feno taona Turkey. Izy io dia iray amin'ireo marika marobe izay hampiasaina rehefa mamaritra ity dingana fiainana ity.
Ny tena marina dia ny zava-misy amin'ny fampiasana stereotypes amin'ny karazana vanim-potoana voalaza etsy ambony an'ny vorontsiloza, dia tsy manao soa amin'ny tanora manandrana mamolavola ny toetrany mba ho lasa olon-dehibe.
Fa maninona no fotoana maha-tanora ny fotoana maha tanora?
Tena ara-dalàna ho an'ny ray aman-dreny ny mampiseho tsy fahatokisan-tena momba ny hoe ny zanany dia lasa zazakely ka lasa zatovo. Saingy tsy tampon-tampony ity mba hahafahana mametraka marika marobe amin'ny tanora. Tsy misy isalasalana fa ny tanora dia hiatrika andiana fanovana tena lehibe na ara-batana na ara-tsaina. Saingy ny fiovana toy izany dia tsy ratsy na ratsy ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tanora ihany. Noho izany, zava-dehibe ny fanesorana ireo klika rehetra sy ny marika fahatanorana toy ny andianteny malaza: "ity zaza ity dia efa antitra"
Ny dingana maha tanora dia tokony ho fotoana tsy manam-paharoa sy tsy azo averina intsony fa tsy maintsy miaina 100% ny tanora. Tsy maninona ireo fomba fijery samihafa ananan'izy ireo momba azy ireo, satria miankina betsaka amin'ny ray aman-dreny sy ny matihanina ny manome antoka fa afaka manararaotra ny fahaizany sy ny fahaizany ny tanora ary ho lasa olon-dehibe izay tena mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » tanora » Ny antsoina hoe taonan'ny vorontsiloza amin'ny fahatanorana
Ny lakilen'ny sakafo maharitra
Rihana hazo alaina: nahoana no malaza be izy ireo?